क्रिकेट मैदानका लागि फूल्टेक्राको जग्गा उपयुक्त – sunpani.com
क्रिकेट मैदानका लागि फूल्टेक्राको जग्गा उपयुक्त
सुनपानी । ४ फाल्गुन २०७६, आईतवार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जमा क्रिकेट मैदानका लागि वडा नं. ६ फूल्टेक्राको खाली जमिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
वडा नं. २ का अध्यक्ष एवं क्यानका पूर्व केन्द्रीय सदस्य सुनिलसिंह हमालको संयोजकत्वमा रहेको उपयुक्त ठाउँ छनौट समितिले फूल्टेक्राको खाली जमिनलाई उपयुक्त मानेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिले फूल्टेक्रा, वडा नं.१४ को भवानीयापुर र वडा नं. १९ को बसुदेवपुरको तलाउ र आलानगरको जग्गा हेरेको थियो । सबै भन्दा उपयुक्त ठाउँ फूल्टेक्रा भएकाले त्यही क्रिकेट मैदान बनाउनका लागि प्रतिवेदन बुझाइएको कार्यदलका संयोजक सुनिलसिंह हमालले जानकारी दिनुभयो । फूल्टेक्राको जग्गामा केही विवाद रहेको छ । धार्मिक विवाद भएपनि क्रिकेट मैदान बनाउदा कुनै समुदाय विशेष नहुने भएकाले क्रिकेट मैदान बनाउन उपयुक्त हुने ठानिएको छ । क्रिकेट मैदान हुँदै स्टेडियम बनाउनका लागि फूल्टेक्रामा जग्गा पुग्ने र पायक पर्ने ठाउँमा रहेको समितिको बुझाई रहेको छ ।
समितिले आइतबार मेयर डा. धवलशमशेर राणालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपमहानगरपालिकाको आगामी बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने मेयर राणाले बताउनुभयो ।
फूल्टेक्राको जग्गामा सामान्य विवाद रहदै आएकाले त्यसलाई सुल्झाउनका लागि छलफल र सम्वाद गर्ने अधिकार दिन कार्यदलले माग गरेको छ । बोर्ड बैठकले त्यसप्रकारको अधिकार दिने निर्णय गर्दा कार्यदल छलफलमा जुट्ने वडा नं. १३ का अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालगञ्जमा क्रिकेट मैदान नहुँदा खेलाडीले प्रशिक्षण र प्रतियोगिता खेल्न पाएका छैनन् । उपमहानगरपालिकाले जग्गामात्रै खोज्न नसक्दा प्रदेश सरकारबाट पैसा आउदै फर्किने गरेको छ । क्रिकेटका लागि जग्गा उपलब्ध हुने वित्तिकै प्रदेश, केन्द्र र क्यानले समेत सहयोग गरेर छिट्टै मैदान तयार हुने सम्बद्धहरु बताउँछन् ।